Xiddigta Leo: astaamaha, xiddigaha iyo quraafaadka | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 20/05/2021 10:00 | Astronomy
Dhammaan xiddigaha xiddigta ee aan ka helno cirka ee ka tirsan xiddigta xiddigiska waxaan leenahay Leo. Ku xiddigta leo Waxay ku taalaa inta udhaxeysa xiddigta Virgo ee bidixdaada iyo Kansarka midigtaada. Waxay leedahay dhowr xiddigood oo waaweyn waxaana jira dhowr maydh oo meteor la socda oo badanaa la arko xilliga qaboobaha.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato xiddigta Leo iyo astaamaheeda.
2 Sidee loo helaa xiddigta Leo
3 Xiddigaha waaweyn ee xiddigta Leo
Waxaa jira laba qubeys oo meteor ah oo xiriir la leh kooxdan, Delta-Leonids, oo firfircoon laga bilaabo Febraayo 15 illaa 10 Maarso, iyo Leonidas, oo firfircoon laga bilaabo Noofambar 10 illaa 23. Leo waa xiddig ballaadhan oo isleeg ah oo matala libaaxa. Bilaha kudhowaad Febraayo, waxay umuuqataa inay sarreyso cirka saqda dhexe. Xiddigtiisa ugu ifka badan, Regulus, waxay aad ugu dhowdahay qorrax-dhaca, waddada ay qorraxdu u raacdo cirka sannad kasta. Sannad kasta laga bilaabo bartamaha Ogosto illaa iyo bartamaha Sebtember, qorraxdu waxay dhex martaa Leo.
Waqooyiga Regulus, manka libaaxa waxaa matalaya qalooca xiddigaha labaad iyo saddexaad. Aad uga fog diyaaradda loo yaqaan 'Milky Way', sheyga ugu moolka dheer ee aaggan cirku ka jiro waa Xiddiga Sagaalaad ama Weak Galaxy. Kuwa ugu dhalaalaya waa Leo Triplet, oo ah isku-dhaf isku dhow oo ah seddex galaxyo gravwially gravitationally: M65, M66 iyo NGC 3628.
Caddooyinka Giriigga, Leo waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay libaax Nemean ah oo uu dilay Hercules. Maqaarkiisa waxaa ilaaliyay hubka oo dhan, fallaadhaha Hercules-na waxay ka leexdeen bahalka. Ka dib markuu ceejiyey bahalka, Hercules wuxuu maqaarkiisa u isticmaalay sidii maro.
Sidee loo helaa xiddigta Leo
13ka xiddigood ee xidigta xidigta, tani waa mid kamid ah kuwa ugu caansan ee samada habeenkii. Dadka intooda ugu badan waxay helaan xiddigta Leo iyagoo marka hore raadinaya qaab u gaar ah qubbada cirka: qaabka calaamadda su'aasha ee foorara. Xiddigaan ama xiddigta waxaa loo yaqaan 'sickle of Leo'. Regulus, oo ah xiddigga ugu ifka badan Leo, ayaa hoosta ka xarriiqaya qaabka calaamadda su'aasha foorara.
Marka laga eego aragtida woqooyiga, libaaxu waa saaxiib cimilo caddaalad ah, oo cirka u boodaya galabtii hareeraha vernal equinox ee Maarso. Dhamaadka Maarso, Abriil iyo Maajo waa dhowr bilood si loo aqoonsado Leo, maxaa yeelay mar hadday habeen tahay, xiddigtaani waa la arki karaa oo la joogi karaa ilaa waagu beryo subax. Xusuusnow inaad raadiso qaab calaamadeyn su'aal gadaal.
Xiddiga saddex geesoodka ah ee qaybta bari ee Leo wuxuu matalaa libaaxa gadaashiisa iyo dabada. Xiddiga ugu quruxda badan saddex-xagalka waxaa loo yaqaan Denebola, oo ka timid Carabi oo macnaheedu yahay "dabada libaaxa." Sida xiddigaha oo dhan Xiddigaha Leo waxay ku soo noqdaan isla booskii cirka afar daqiiqo ka hor maalin kasta ama laba saacadood ka hor bil kasta.
Horraantii Abriil, xiddigta Leo waxay cirka isku shareertaa 10-ka fiidnimo (11 pm waqtiga maalinnimada maxalliga ah) waxayna bilaabmaysaa inay hoos uga degto jihada galbeed qiyaastii 4 subaxnimo (5 galabnimo waqtiga iftiinka deegaanka). Qiyaastii Maajo 1, Leo wuxuu gaaraa ugu dambaynta habeenkii qiyaastii 8 pm. Waqtiga maxalliga ah (9:00 fiidnimo, waqtiga keydka iftiinka xaafadda). Sidoo kale, horraantii Maajo, Libaaxyada xoogga leh waxay bilaabaan inay dagaan galbeedka qiyaastii 2 am. Waqtiga maxalliga ah (3 subaxnimo xilliga xagaaga). Bishii Juun, xiddigta Leo waxaa la arkaa iyadoo ka soo degaysa galbeedka galabtii.
Xiddigaha waaweyn ee xiddigta Leo
Aan aragno waa kuwee xiddigaha ugu waaweyn ee koox koox Leo ah:
Denebola: waa xiddig taxane cad oo dhalaalaya, sidoo kale loo yaqaan Beta Leonis, oo qiyaastii 36 sano oo iftiin ah ka socda Dhulka. Marka la barbardhigo dhulka, cufkiisa iyo gacantiisa ayaa 75% kaliya ka weyn qorraxdayada.
Zosma: Sidoo kale loo yaqaan Delta Leonis, sida Denebola Zosma waa xidig cad oo taxane ah oo kuyaala qiyaastii 58 sano oo iftiinka dhulka ah, xidiggu wuxuu leeyahay cuf iyo gacan wareeg kudhow laba qorrax.
Jaantus: Sidoo kale loo yaqaan Theta Leonis, oo ay weheliyaan Denebola iyo Zosma Chort, waxay sameysataa sinta Leo oo ah qaab saddex xagal dhalaalaya. Sida labada kale ee Xhortu waa xiddigo cadcad oo taxane ah, waxay 165 sano oo iftiin ah u jiraan saddexda xiddig, markaa saamayntu sax ma aha.
Sharciye: Sidoo kale loo yaqaan 'Alpha Leonis', Regulus ma aha oo kaliya xiddigta ugu ifka badan xiddigaha, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah xiddigaha ugu ifka badan cirka habeenka. Regulus waa nidaam afar xiddigle ah oo ku yaal qiyaastii 80 sano oo iftiin ah dhulka, nidaamku wuxuu ka kooban yahay Regulus A dhalaalaya iyo saddex xiddigood oo madow. Regulus A waa xiddig weyn oo buluug ah oo isku xigxiga oo qiyaastii 4 jeer ka weyn culeyska iyo gacan qorraxda.
AlgiebaSidoo kale loo yaqaan Gamma Leonis, waa nidaam laba xiddigle ah oo qiyaastii ah 130 iftiin-sano oo ka fog Dhulka. Nidaamku wuxuu ka kooban yahay laba xiddigood oo waaweyn oo laba-geesood ah oo ku wareega wareega 16 bilyan oo mayl wareeg ah (26 bilyan oo kiilomitir).
Adhafera: Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Zeta Leonis', Adhafera waa xiddig weyn oo cadaan-huruud ah oo qiyaastii 270 sano oo iftiin ah ka socota Dhulka, waxay qiyaastii lix jeer ka weyn tahay dhexroorka qorraxda iyadoo leh saddex jeer cufkeeda.
Sida xiddigaha kala geddisan, Leo wuxuu kaloo ku saleysan yahay halyeeyada halyeeyada halyeeyada Griiga iyo Hercules, ina Zeus. Ka dib markii ay waashay hooyadiis, halyeyga barakaysan wuxuu lix carruur ah ku dilay cadho indho la '. Markii uu ka soo kabtay waallidii ku meel gaarka ahayd, Hercules wuxuu isku dayay inuu kafaaroodo dambiyadiisa si uu ugafiyo falalkiisa. Ugu dambeyntiina, Hercules ayaa ugu dambeyn loo daayay mas'uuliyadda King Eurystheus, kaasoo u xilsaaray hawlo taxane ah.
Talaabada ugu horeysa ee howlahaan waa in la dilo libaax argagax geliyay magaalada Nemea. Libaaxa ma yaqaanno Hercules, wuxuu leeyahay dabool dhogor dahab ah, fallaaro iyo seefo ma geli karaan. Markii uu booqday hoyga libaax markii ugu horreysay, Hercules wuxuu ogaaday taas fallaadhiisu si fudud bay uga boodday bahal. Booqashadiisii ​​labaad, geesiga ayaa xidhay mid ka mid ah labada jid ee laga soo galo daraasadda oo galay isaga oo ku hubaysan budh weyn, libaaxa ayuu ku garaacay ushiisa wuuna ceejiyey
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto kooxdu Leo iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Xiddigta leo